AKWỤKWỌ MMADỤ MMADỤ GW D150/D170/D190
GW-D usoro ejima mma mpempe akwụkwọ na-anabata ihe dị elu nke ejima rotary mma cylinders nke ejiri ike AC servo moto dị elu na-anya ya nke ọma na ịkpụ dị ọcha.A na-eji GW-D n'ọtụtụ ebe maka ịcha osisi, akwụkwọ kraft, akwụkwọ mpempe akwụkwọ, akwụkwọ metalized, akwụkwọ nkà, duplex na ihe ndị ọzọ ruo 1000gsm.
A na-eji 1.19 ″ na 10.4 ″ ihuenyo mmetụ ihu abụọ na mbepụ nkeji na njikwa nnyefe iji tọọ ma gosipụta nha mpempe akwụkwọ, ọnụ ọgụgụ, belata ọsọ, ndakọrịta nnyefe, na ndị ọzọ.Njikwa ihuenyo mmetụ ahụ na-arụkọ ọrụ na Siemens PLC.
2.The TWIN KNIFE unit nwere a synchonic rotary ọnwụ mma dị ka mkpa na ihe na-eme ka ire ụtọ na ezi ọnwụ maka akwụkwọ si 150gsm na ruo 1000gsm.
Teknụzụ nke akụrụngwa
Dị ka teknụzụ GW ngwaahịa si kwuo, a na-ejikarị igwe a eme ihe maka mpempe akwụkwọ na akwụkwọ mpempe akwụkwọ, Ụlọ obibi na wdg, tumadi usoro gụnyere: Unwinding-Cutting-Conveying-Collecting,.
Isi ihe njiri mara
A na-eji 1.19 "na 10.4" ihuenyo mmetụ ihu abụọ na mbepụ nkeji na njikwa nnyefe iji tọọ ma gosipụta nha mpempe akwụkwọ, gụọ, igbutu ọsọ, ndakọrịta nnyefe, na ndị ọzọ.Njikwa ihuenyo mmetụ ahụ na-arụkọ ọrụ na Siemens PLC.
2.The elu-ọsọ belt na-chụpụrụ British CT elu-power servo iji hụ na-eji ire akwụkwọ mmepụta.Usoro mkpofu pneumatic na-ewepụ akwụkwọ mkpofu ma mee ka ịdị mma nke ọrụ dịkwuo mma.Ngwa mgbanaka eriri mmiri gas na-eme ka eriri ọ bụla nwee ike ịgba ọsọ nke ọma.
3.The TWIN KNIFE unit nwere a synchonic rotary ọnwụ mma dị ka mkpa na ihe na-eme ka a na-eji ire ụtọ na nke ziri ezi ọnwụ maka akwụkwọ si 150gsm na ruo 1000gsm. The mma na-akpụ akpụ na akwụkwọ na-adọta roller na-pụrụ iche site na 2 CT nnukwu ike servo. site na UK, were usoro nhazi ihe eji eme ihe na-enweghị oghere, yana yana GW's 5 axis high correct CNC ka igwe kwụ ọtọ n'otu ibe.iji kpochapụ ọdịiche na-ama jijiji nke mma abụọ ahụ nke ọma, na-eme ka ndụ nke agụba na ịcha ihe ziri ezi.nke na-ekwe nkwa nkwụsi ike nke ahụ ngwá ọrụ n'oge ọrụ ọsọ ọsọ.
4.Three tent nke arọ ọrụ pneumatic slitters hụ na kwụsiri ike ma dị ọcha slitting.Eletrik chụpụrụ akpaka ịkpụ obosara mgbanwe.(*Nhọrọ).
5.Dual shaftless azụ guzo na web esemokwu njikwa na pneumatic breeki nkeji bụ ọkọlọtọ.
6.The ịgba gia lubrication usoro ana achi achi gia na-n'ụzọ zuru ezu lubricated n'oge wholeoperation.Ịgbatị ndụ igwe nke ọma nke ọma.
Nlereanya GW D150/D170/D190
Ụdị ịkpụ Mma ejima, elu agụba na ala agụba rotary ọnwụ
Oke ịdị arọ akwụkwọ 150-1000 GSM
Ike ibu igwe kwụ ọtọ: 2 tọn
Dayameta igwe kwụ otu ebe Oke 1800mm (71")
Ogologo obosara Oke 1500/1700/1900mm (66.9")
Ebipụ ogologo ogologo Min.400-Max.1700 mm
Ọnụ Ọgụgụ.nke mpịakọta ịcha 2 mpịakọta
Ịcha izi ezi ± 0.15mm
Oke.Ọsọ nke ịkpụ 400 mbe / min
Oke.Ịcha ọsọ 300m/min
Ogologo nnyefe 1700mm (gụnyere pallet)
Voltaji AC380V/220Vx50Hz 3h
Isi moto ike: 64kw
Mkpokọta ike 98kw
Mpụta Ezigbo mmepụta na-adabere na ihe onwunwe, na ịdị arọ nke akwụkwọ ahụ, na usoro ọrụ ziri ezi
1. Okwa abụọ na-enweghị isi pivoting ogwe aka kwụpụ ihe nkwụnye
2. breeki pneumatic diski jụrụ ikuku
3. Esemokwu akpaaka dabere na dayameta ahịhịa
4. Sistemụ decurler na-achịkwa servo
5. EPC na-eduzi webụsaịtị
6. Ejima helical mma cylinders
7. Usoro atọ nke Pneumatic Slitters
8. Ogwe mgbochi static
9. Ọpụpụ ndepụta na nchikota ngalaba
10. Ngalaba nnyefe hydraulic 1700mm
11. Ọgụgụ akpaaka wee pịa ntinye
12. Ihuenyo mmetụ abụọ
13. JIJIN PLC, UK CT Servo Driver, Schneider inverter, ngwa eletriki ebubata
14. Ụzọ ọpụpụ
1. Dual ọnọdụ shaftless pivoting ogwe aka unwind guzoro
Ogbe abụọ na-enweghị isi pivoting ogwe aka kwụpụ n'ụkwụ nwere usoro egwu nke ime ụlọ na trolley.
2. ikuku jụrụ oyi pneumatic diski breeki
Ikuku jụrụ breeki diski pneumatic a na-achịkwa na ogwe aka ọ bụla.
3. Nchekwa onwe esemokwu dabere na reel dayameta
Onye na-ahụ maka esemokwu akpaaka na-enye gị njikwa dị mma na esemokwu ahụ karịsịa maka obere igwe.
4. EPC web eduzi
Ihe mmetụta EPC yana “mkpụrụ ọkụ na-akụ” nọọrọ onwe ya na-enye ohere maka mbelata ihu kacha nta nke webụ, yana njikwa siri ike nke ihu webụ n'ofe mmiri ahụ site na mmalite ruo n'isi.
5. Servo na-achịkwa decurler usoro
Sistemụ decurler na-achịkwa servo nwere ike ịchọpụta dayameta nke akwụkwọ na-akpaghị aka ma mezie ike nrụpụta, enwere ike ịtọ ọnụọgụgụ site na gsm dị iche iche, ike ntụgharị ga-esochi ihe setịpụrụ na dayameta.
6. Ejima mma nke servo moto na-anya
a.The ejima helical mma ana achi achi nke ukwuu nkọ na dị ọcha ọnwụ onu na elu ziri ezi
b.The agụba bụ nke pụrụ iche alloy st eel SKH.9 na ogologo ndụ na mfe mmezi.Twin mma roller na akwụkwọ Anam Udeme ala na-anya site iche iche servo moto.
Nnukwu ọrụ pneumatic slitters na-eme ka nkewa kwụsiri ike yana dị ọcha.
9. Out ndepụta na overlapping ngalaba
a.N'ụzọ zuru ezu mekọrịta ọsọ n'etiti nnukwu ọsọ outfeeding na overlap teepu ngalaba na-ejigide a kwesịrị ekwesị shingle.
b. Overlapping unit na mgbanwe overlapping uru na jam-stop sensọ.Enwere ike ịtọ otu mpempe akwụkwọ.
12. Siemens ihuenyo mmetụ
Ogologo oge ịkpụ, ọnụọgụ, igwe ọsọ, mbelata ọsọ nwere ike igosipụta ma tọọ site na ihuenyo mmetụ.
10. Ngalaba nnyefe hydraulic
14. Ọnụ ụzọ achụpụ
11. Ngụta akpaaka wee pịa ntinye
13. Self e mere PLC, Schneider inverter, CT Servo moto, FUJI servo ọkwọ ụgbọala
2. Mechanical-amụba chack
3. Ndozi obosara nke ịkpụ akpaaka
4. Mgbanwe pallet akpaaka
5. Nnyefe elu eriri
6. stacker anaghị akwụsị akwụsị
7. Nyocha cursor
8. Usoro nchekwa nchekwa na-agbachi agbachi na usoro nchekwa mkpọchi
2. Mechanical-amụba chuck
3. Akpaaka ịkpụ obosara mmezi
4. Akpaaka pallet mgbanwe
6.Na-adịghị akwụsị stacker
8. Nchekwa nchebe na-adịghị agwụ agwụ na usoro nchebe nke interlock
Mgbanwe magnetik (waị abụọ)
Mgbanwe nso (NPN)
Mgbasa ozi steeti siri ike (40A)
oghere agbagharị agbagharị
Mgbasa ozi etiti
AC / DC kọntaktị
Ihe nbelata oghere
Ihe mgbaji sekit
Ihe nchekwa moto
Ụlọ ọrụ Schneider Electric
Bọtịnụ (mkpọchi onwe)
Họrọ mgba ọkụ
Enweghị modul kọntaktị
Onye njikwa servo
Onye ọkwọ ụgbọ ala Servo
Ihe ntụgharị ugboro ugboro
Onye ọkwọ ụgbọ ala Servo 0.4kw
Ọkụ ọkụ na-agbanwe
Ihe ngbanwe ihe nrụgide hydraulic
Servo moto (CT 18.5kw)
Servo moto (CT 64kw)
Servo moto (CT 7.5kw)
Centrifugal ọkara-nrụgide ikuku (0.75kw, 2800rpm)
D150 Nhazi ejima mma mma
Nke gara aga: GW MKPỤRỤ Ibé akwụkwọ CUTTER S140/S170
Osote: S-28E Igwe eji eji mma atọ maka ịkpụ akwụkwọ